AIDS ဖြင့် ဆုံးပါးသွားသူများအား ရည်စူး၍ ဘာသာပေါင်းစုံ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ပွဲ စစ်ကိုင်း၌ ကျင်းပ - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်းမြို့ ရွှေ ဇေယျာ (CBO)အဖွဲ့မှ AIDS ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသွားသူများ အတွက် ခြောက်ကြိမ်မြောက် အောက်မေ့သတိရဆီမီး ထွန်းညှိ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပွဲကို မေ ၃၁ ရက်ည ၇ နာရီက စစ်ကိုင်း မြို့ ဧမြဝတီရပ်ဧရာဝတီမြစ်ရေ ဆိပ် သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင်ကျင်း ပရာ ဘာသာပေါင်းစုံမှတက်ရောက် ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့ကြကြောင်း သိရသည်။ ရှေးဦးစွာ သဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင် အသင့်ပြင်ဆင်ထားသည့်နေ ရာများ၌ ဖယောင်းတိုင်နှင့်ဆီမီး များထွန်းညှိကြကာ ရွှေဇေယျာ CBO အဖွဲ့နာယက ဒေါက်တာ အောင်ကျော်မျိုးက Candle Light Memorial ပြုလုပ်ရခြင်းအား ရှင်း လင်းပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ AIDS ဖြင့် သေဆုံးသွားသူများအားရည်စူး၍ စစ်ကိုင်းမြို့မှ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ အစ္စလာမ် ဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ဘာသာကြီး လေးခုတို့မှ ကိုယ်စားပြုပုဂ္ဂိုလ်များက ဘာသာအလိုက် ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ အမှတ်တရစကားများ ပြောကြားကြပြီး ဆုတောင်းပွဲတွင် တက်ရောက်လာသူများနှင့်အတူ တစ်မိနစ်ငြိမ်သက်ဆုတောင်း မေတ္တာ ပို့သကြသည်။
စစ်ကိုင်းမြို့ ရွှေဇေယျာ (CBO) အဖွဲ့အနေဖြင့် AIDS ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသူများအတွက် ဆီမီးထွန်း ညှိဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပွဲကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှစတင်၍ နှစ်စဉ် မေလ၌ကျင်းပခဲ့ရာ ယခုနှစ်ကျင်းပသည့် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပွဲမှာ ခြောက်ကြိမ်မြောက် ကျင်းပခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ဂျူဗင်တပ်နှင့် ဆာရီတို့ သဘောတူညီမှု ရထားကြောင်း သတင်းထွက်၊ ဟာဇက်အတွက် ချဲလ်ဆီးနှင့် ရီးရဲလ??
တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်တို့မှ စာအုပ်များကို သေ့ာခတ် မထားရန်နှင့် စာအုပ်မှာ စာဖတ်သူရှိမှ တန်??